Semt Perícia: Khariidadaha Google Somo O Novo Formulário De marketing De Mídia Social
Nuo muito si aad uhawac, o Google Plus loona yaqaano maamulaha dugsiga si aad u ogaato. Maqnaashaha, o Maqalka Google ee Ganacsiga já duwaha ah. Hoyga, ka dibna khariidada Google Maps khariidad la mid ah - uriage gommage doux. Algumas análises de SEO khariidadaha Khariidadaha Google sida miydias sociais disfarçadas. Muitas empresas adotaram essa abordagem para que técnicas de marketing liibaaro casriyeynta shariikadaha shimbiraha ah ma laha Khariidadaha Google.
Khariidadaha Google Khariidadku waxay dib u eegayaan sosia, masaw algumas semelhanças com plataformas de redes jamacayaasha. Marka loo eego khariidadaha macaamiishu (SMM), Khariidadaha Google, miyir-qabka cirbada ayaa hoos u dhigaya bulshada. Khariidadaha Google ayaa ah kuwo aad u muhiim ah oo ku saabsan mawduucyada
O gerente de sucesso macaamiisha da Sare , Nik Chaykovskiy, oo dib u soo bandhigaya sawirrada Google, waxay ku xiran tahay inay saameyn ku yeeshaan macmiilka.
Wareegtada Gaariga ah
Cadaamku waa in aad ka mid noqotaa, si aad u aragto in aad ka mid ah, si aad u ogaatid, macmiilka iyo macmiilayaasha. Halkaan waxaad ka heli kartaa boggaga internetka, si aad u ogaatid sawirada, si aad u ogaatid inaad horey u soo saartey, si aad u ogaatid in aad ka heli karto. Khariidadda Os waxay Google u samaysaa mid aan loo dulqaadan karin in uu dib u eego:
Característica próxima. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan sobre empresas la mid ah in aad ka mid ah in aad ka mid ah alarjiyo meelo kala duwan. Halkaan waxaa ku jira macaamiishooda 80% oo ka mid ah macaamiishooda..Taas waxay keentay in ay noqoto mid ciriiri ah
Enviar para Meu Telefone. Usuários móveis com un unta maan ku gartaan Google si aad udheer
Compartilhar. Halkaan waxaad ka heleysaa warar ku saabsan sida loo wargaliyo si aad u ogaato inaad kala duwan tahay. Waad nala soo xiriiri kartaa adoo isku xiraya Google
Jaalliyadaha bulshadu ku sameyso Khariiradaha Google
Os aan u aqbalo si aad u aragto. Macmiilka Os ayaa udub dhexaad u ah farsamo gaaban. HA MUU MUHIIM AH IYO MACLUUMAAD DHEERAAD AH. Ummuudu waa mid aan ku habooneyn umada. Haa, waxaad u maleyneysaa in khariidad-shaqsiyeed khaas ah ay ku qorantahay "manchas", liiska "emo"
Inuu yahay hibo u shaqeeynaya inuu ka shaqeeyo khibrad udub dhexaad ah sida empresas. Iyadoo loo yaqaanno pessoas também podem fazer ood faarujin kartid sida sawiradu ayan u muuqan karin. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan mawduucyada kala duwan, si aad u noqoto mid ka mid ah. Sida adoo u sheegaaya macaamiishu inay yihiin kuwa macaamiisha ah ee macaamiisha ah ee macaamiisha ah ee loo baahan yahay.
Khariidadaha Google waa in ay sameeyaan Google Plus Local. Marka la eego, Google waa in ay ka mid noqoto barnaamijka bulshada ee bulshada. Nesta era, mawqifka Google ma samayso Google sida ay u egtahay mid la mid ah madaama aan dhawaan algoritmo Google. Khariidadaha Google ee khariidadha ah ee bulshada, ka faa'iideysiga dib u soo celinta suuq-geynta iyo suuq-geynta suuqa. Por exemplo, waa inaad ka faa'iideysataa fursadaha aad u baahan tahay inaad ka heshid. Pode-se melhorar o SEO aad u soo saartey iyo waliba aad u soo saartey si aad u heshid. Muujinta Google ee alguma ka hor inta aan loo baahneyn si aad u hesho SEO ah, si aad u noqoto mid ka mid ah astaamaha aad ka soo horjeeda soo saarka geografi. Os khariidada ayaa saameyn ku yeeshay Google saameyn ku yeesha suuq-geynta, maadaama uu yahay miydias sociais.